Soo ogow Tattoo-ga isdaba jooga ah ee Mo Ganji, oo ah farshaxan asal ah | Tattoo
Tattoo Mo Ganji oo joogto ah
Susana Garcia | | Fanaaniinta Tattoo, Tattoos
Waxay umuuqataa in waxwalba laga sameeyo tattoos, waxaanna aragnay dhamaan noocyada isbeddellada iyo fikradaha. Way adagtahay in laga helo taabasho asal ah iyo mid gaar ah adduunka tatooyada, maaddaama dhammaan noocyada halkaas ka jira la baaray. Si kastaba ha noqotee, waqti ka waqti farshaxan ayaa yimaada oo ka sarreeya dadka kale shaqadiisa iyo qaabkiisa iyo qaabkiisa qeexan ee u horseedaya caan, sida Waxay kudhacdaa sawirka Mo Ganji.
In kasta oo magiciisu yahay, waxaan la macaamilnaa Berliner oo noqday farshaxan yaqaan caan ah oo loo yaqaan 'tattoo' sawiro sawiro ay ka muuqdaan khadad adag. Iyada oo la adeegsanayo hal khad oo aan kala go 'lahayn, ayaa lagu abuuri karaa dhammaan noocyada sawirrada iyo fikradaha. Fikradani waa mid layaableh waxayna umuuqataa mid ay adagtahay in laqabto, laakiin markaan aragno nashqadeyntiisa waxaan ogaanay inuu yahay farshaxan abuuri kara kudhowaad nooc kasta oo sawir ah figradan.
1 Khadadka adag ee tattoo leh yey
2 Tattoo wajiga
3 Tattoo oo leh sawir dumar ah
4 Tattoo oo leh walxo dabiici ah
5 Tattoo xoolaha
6 Tattoo maroodiga oo leh khadad adag
Khadadka adag ee tattoo leh yey
El yeeydu waa xayawaan loo adeegsaday astaamo fara badan astaanteeda weyn. Yeygu wuxuu ka tirsan yahay baakad wuuna ku badbaadayaa isaga, oo xambaarsan caro iyo aaminnimo. Shaki la’aan, waa xayawaan aamin ku ah tiisa isla markaana muujinaya geesinimadiisa. Farshaxanistu wuxuu awooday inuu soo qabto yey faahfaahintiisa oo dhan isagoo adeegsanaya xariiq xariiqa xariijimaha joogtada ah. Tattoo-yadiisa ayaa istaagaya maxaa yeelay wuxuu kaliya isticmaalaa xariiq aan jabin meel kasta. Waxaa lagu sameeyaa xariiqyo madow oo fiiqan. Waa in la sheegaa in sawiradaada khadadka ay ka sii dhumuc weyn yihiin ama ku yar yihiin iyadoo kuxiran khadadka aad rabto inaad muujiso si aad u siiso xaqiiqda dhabta ah sawirka iyo muuqaalkeeda. Yeyda waxaan ka dhex arki karnaa sida banaanka, indhaha iyo muuska u taagan yihiin.
ka dadka wajiyadooda waa tattoo kale taas oo fanaankani uu aad ugu fiican yahay. Waxaan arki karnaa dhowr matalaad ah oo ka guuraya xaqiiqda una gudbaya dhanka sal-dhigida, oo leh tirooyin ku milma khadadka. Fikradda wali waa mid la yaab leh sababtoo ah awooda lagu abuuri karo dhammaan sawirada hal xariiq. Waxaan ku aragnaa wejiga haweeneyda bushimaheeda ama labo weji oo lagu qasay mid lagu farsameeyay farsamadan. Waxay u baahan tahay heshiis weyn oo hal-abuur leh oo wixii ka sarreeya oo dhan inay ku fiicnaato sawir qaadista si loola yimaado qayb kasta.
Tattoo oo leh sawir dumar ah
Tani waa mid ka mid ah tattoos ka fudud, taas oo aan ku aragno sawirka gabadha gadaasheeda. Tattoo-yadaas, dhibco yaryar ayaa sidoo kale mararka qaarkood loo isticmaalaa sidii hoos si ay u taabato. Waxay yihiin tattoos xarrago leh oo soo jiidan kara dareenka lahaanshaha dareerahaas.
Tattoo oo leh walxo dabiici ah
Kuwaas Tattoos qabow ayaa lagu dhiirrigeliyey waxyaabo dabiici ah. Dhinac waxaan leenahay cananaas la abuuray iyada oo khadadkaas joogtada ahi ay muujinayaan aagga sare ee khadadka dhaadheer. Dhinaca kale, waxaan ka helnaa ubax jilicsan, oo ah halyeeyada tiro badan oo tattoos ah waxaan horeyba u aragnay inay matalayaan dhammaan noocyada, marka laga reebo xariiqan joogtada ah. Haddii aad ka shakisan tahay hab aad u xiiso badan oo aad ku xirato astaantaan dheddig iyo qurux.
ka Tattoo xayawaanka Iyagu maahan wax asal ah sidoo kale, maadaama ay jireen sannado badan. Dhammaantood waxay astaan ​​u yihiin wax, sidaa darteed waxaan badanaa la kulannaa xayawaannada noocyadooda kala duwan. Asal ahaan asal ahaan badanaa waxay ku timaadaa habka iyaga matala. Waqtigan xaadirka ah, sawir gacmeedka xayawaanka ee lagu abuuray qaababka joomatari ayaa aad moodada, laakiin tatooyadani way sii yara socdaan. Sidaad arki karto, sawir gacmeedyadan sidoo kale waxay leeyihiin dhibco lagu daro qaar ka mid ah hooska qarsoon ee sawirada. Laakiin sawirka laftiisa waxaa lagu sameeyaa xariiqyo, waana sababta ay u gaar u tahay.
Tattoo maroodiga oo leh khadad adag
Waxaan la soconnaa tattoo maroodiga, oo lagu abuuray xariiqyo badan. Maroodigu wuxuu xambaarsan yahay xigmad, markaa qofkii xidha ayaa doonaya inuu metelo tayadan. Maxaad u maleyneysaa astaantan xariiqa joogtada ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo Mo Ganji oo joogto ah
Ku xirnaasho: sayniska ka dambeeya dabeecadda